तलब पाउने भएपछि २ हजार नेपाली श्रमिकले हडताल फिर्ता लिए, काममा फर्कन सहमत — sancharkendra.com
तलब पाउने भएपछि २ हजार नेपाली श्रमिकले हडताल फिर्ता लिए, काममा फर्कन सहमत
काठमाडौँ । मलेसियाको डब्लूआरपी कम्पनीमा कार्यरत झन्डै २ हजार नेपाली श्रमिक बुधबारदेखि काममा फर्कन सहमत भएका छन् । तीन महिनादेखि तलब नपाएपछि उनीहरू सोमबारदेखि हडतालमा थिए ।
कम्पनीको लिखित प्रतिबद्धतापछि नेपाली दूतावासले कामदारलाई काममा फर्किन अनुरोध गरेको थियो । ‘दूतावासले नै तलब पाउने ग्यारेन्टी गरेको छ । हामीलाई काममा फर्किन अनुरोध गरेपछि हडताल तोडेका हौं,’ खोटाङका ललित घलानले भने । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
यस्तै यतिबेला सरकारकाे चिकित्सक सहितकाे बिशेष टाेलि मलेसियामा छ । मलेसियाका लागि नेपाली राजदुतावास मलेसियाकाे पहलमा सरकारले चिकित्सक सहितकाे एक टाेलिलाई मलेसियामा हुने नेपालीको मृत्युुकाे कारण खाेज्न मलेसिया पठाएको हाे ।
मलेसियामा बिभन्न कारणले नेपालीहरु बर्सेनी ४०० काे दरले मृत्युवरण गरिरहेका छन । केही दिन अघि मलेसिया प्रबेश गरेकाे पांच सदस्यीय टाेलिले शुक्रबार नेपाली राजदुतावास क्वालालम्पुरमा पत्रकार संग भेटघाट गर्दै लेसियामा नेपालीहरुकाे मृत्यु हुने कारण बारे छिट्टै टुङ्गोमा पुगेर मृत्यु सङख्या घटाउने बताएको छ ।
टोलीमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा. केदार बराल, सहिद गंगालाल हृदयकेन्द्रका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्रा. डा. रामेश कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सनद केसी, राजु पोखरेल र श्रम मन्त्रालयबाट अर्जुन खनाल रहेका छन् । टाेलिले मलेसियामा विभिन्न नेपाली समुदाय, संघ , राजदुतावास , मलेसियाकाे मेडिकल कलेज, श्रमिकहरु संग छलफल तथा अध्ययन गरेकाे छ ।
विभिन्न रिपोर्ट , डाटा, प्रकृतिको पुर्ण अध्ययन पछि जराेमा पुगेर मृत्यु बारे ठाेस तरिकाले अगाडि बढ्ने बताएको छ । युनिभर्सिटी मलेसिया , मेडिकल कलेज, अस्पतालबाट मृत्यु बारे रिपोर्ट सङकलन कार्यभैरहेकाे र यसकाे अध्यानपछि ठाेस निर्णयमा पुग्ने टाेलिले बतायाे ।
यता नेपाल सरकारले भने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मानिने पासपोर्ट (राहदानी) मा समेत अनावश्यक अंकुश लगाउने भएको छ । सरकारले पासपोर्ट माग्न जानेलाई ‘जारी नगरिने’ सूचीमा पारेर कस्न लागेको हो ।
संघीय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको ‘राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा पासपोर्ट जारी नगरिने नकारात्मक सूची तयार पारिएको छ ।
विधेयकको दफा १२ को उपदफा (१) को (क) देखि (ज) सम्मको सूचीलाई जहिल्यै दुरुपयोग गर्न सकिने खतरा छ । दफा १२ को उपदफा १ (क) मा व्यवस्थति गैरनेपाली नागरिकलाई राहदानी जारी नगरिने प्रावधान स्वाभाविक भए पनि अन्य प्रावधानमा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरु औंल्याउँछन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।